Habeen iyada oo Xaaskeygu Hurudo ayaan jaleecay Xageeda waxaan ka Fekeray qaabka Nolosheeda iyadoo Huruda - Hablaha Media Network
HMN:- Sidee ayey u Dhayal sadaan Ragga qaarkii iney Xaaskooda u Gacan qaadaan oo Dhaawacyo Xun xun ugu gaystaan, markay Go’aansatay iney Gurigoodii ka timaado si ay ula noolaato.
2- Sidee u Dhayalsadaan Ragga qaarkii in ay Muddo dheer ka maqnaadaan Gurigooda, iyagoo Saxiibadood wakhti badan la Qaadanaaya intay Caruurtooda iyo Xaaskooda la joogaana ay yar tahay.
3- Sidee Ragga qaarkii u Dhayalsadaan in ay Xaaskooda Xabsi guri ugu jirto oo aanay marmarka qaarkood u saarin Bannaanka oo aanay Wakhti Wanaagsan u wada qaadan.
4- Sidee Ragga qaarkii ay u Dhayalsadaan iney Seexato Xaaskiisu iyada oo Laabteeda ay ka buuxdo Ciil iyo Murugo ay u qabto Ninkeeda dhibaatada uu u gaysto awgeed.
5- Sidee Ragga qaarkii u Dhayalsadaan in ay Xaaskooda iyo Ubadkooda inta ay ka Safraan oo Muddo dheer ka maqnaadaan iyaga oo aan Dan ka lahayn Mustaqbalkooda iyo waxey ku Sugan yihiin oo aan dib u soo Jaleecin Xiriirna ay ula soo samaynin.
6- Sidee Ragga qaarkii uga Xuubsiibtaan Mas’uuliyadii saarnayd ee la weydiinaayo Maalinta Qiyaamo, sida uu inoo sheegay Rasuulka CSW.
Ugu dambayn waxaan kula talinaa Ragga iney Dumarka si Dabacsan ula Noolaadaan, laguna Dhaqo Wanaag iyo Koolkoolin Madaama ay Xaq wayn kugu leedahay, waana Ogahay iney jiraan Rag aan Xayawaanka wax Dhaamin ee u Aaminsan Xaaskiisa iney tahay Addoon uu isaga soo iibsaday, ugulama Dhaqma Waxyaabo aan qaadan karin Damiirka Bini’aadanka, kuwaasna waxaan leeyahay Xaqa ilaah ha tuso.